ब्राजिल र अर्जेन्टिनाका तर्फबाट विश्वकप खेल्ने खेलाडीहरुकने नाम सार्वजनिक, को को परे ? « Today Khabar
ब्राजिल र अर्जेन्टिनाका तर्फबाट विश्वकप खेल्ने खेलाडीहरुकने नाम सार्वजनिक, को को परे ?
प्रकाशित १ जेष्ठ २०७५, मंगलवार ११:३४
काठमाडौं,१ जेठ । रसियामा हुने विश्वकप फुटबलकालागि ब्राजिल र अर्जेन्टिनाले आफ्नो प्रारम्भीक टोलीको घोषणा गरेको छ। यो प्रारम्भीक मात्र भएको र अन्तिम नामावली जुन ४मा फिफाले गर्नेछ।